Warren Buffett wuxuu ku amaanay Tim Cook mudadii uu hayey hogaanka Apple xusuustii Steve Jobs | Waxaan ka socdaa mac
Warren Buffett wuxuu ku amaanay Tim Cook hogaamintiisii ​​Apple xusuustii Steve Jobs
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah maalgashadayaasha ugu waaweyn adduunka, Marka laga soo tago inuu yahay saamileyda ugu weyn iyo Guddoomiyaha iyo Agaasimaha Guud ee shirkadda Berkshire Hathaway, Warren Buffett wuxuu ku ammaanay Tim Cook hoggaamintiisa Apple. In badan oo naga mid ahi waxay u fikiraan si la mid ah taajirnimada, laakiin qiimo isku mid ah ma leh haddii aan idhaahdo sida haddii uu u yidhaa qof asal ahaan ka soo jeeda maal-qabeenku Warren Buffet ayaa ku amaantay Tim Cook inuu yahay "Maareeyaha cajiibka ah" waana la sameeyay intii lagu jiray shirkii sanadlaha ahaa ee saamileyda Berkshire Hathaway.
Warren Buffet ayaa ku amaantay Tim Cook inuu yahay "maamule cajiib ah" Apple. Wuxuu u yeedhay: «mid ka mid ah maamulayaasha adduunka ugu fiican », waxaas oo dhan waxaa la qabtay intii lagu guda jiray shirkii sanadlaha ahaa ee saamileyda Berkshire Hathaway. Isaga oo ka jawaabaya su'aalaha saamileyda, mid ka mid ah ayaa ku saabsanaa sababta shirkadda maalgashiga ay u iibisay qaar ka mid ah saamiyada guud ee Apple in kasta oo loo tixgelinayo «dahabka afraad» ee shirkadda. Buffet wuxuu fursad u helay inuu ugu hambalyeeyo Apple shirkad ahaan, iyo Cook oo ah hogaamiyeheeda.
Waa shirkad aan caadi ahayn waxayna leedahay maamule cajiib ah. Tim Cook ayaa hoosta laga xariiqay in yar. Waa mid ka mid ah maamulayaasha ugu fiican adduunka. Waxaanan arkay maamuleyaal badan. Adiguna waxaad leedahay badeecad dadku jecel yihiin. Waxay leedahay koox dad ah oo isku dhafan, waxayna helayaan heerar qanac ah oo ah 99%. Waa ganacsi aan caadi ahayn. Waxaan ku aragnaa maamuleyaal badan oo ka socda ganacsiyo badan, waxaadna fiirineysaa labo weyn oo labada dhinac ah halkan.
Marka loo eego labada maamule ee Apple. Kan hada iyo kii hore. Wuxuu iftiimiyay oo rabay inuu cadeeyo in Tim Cook iyo Steve Jobs ahaayeen laba ganacsade oo waa weyn laakiin leh tayo iyo kartiyo kala duwan midba midka kale:
Cook ma uusan sameyn karin wixii Steve Jobs uu si cad uga qaban karay xagga abuurista. Laakiin Steve Jobs wuu awoodi waayey, uma maleynayo, inuu sameeyo waxa uu Tim Cook u sameeyay dhinacyo badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Warren Buffett wuxuu ku amaanay Tim Cook hogaamintiisii ​​Apple xusuustii Steve Jobs
iFixit wuxuu muujinayaa gudaha AirTags-ka